US Troupe ၏ပထမ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ၉၀ သန်းကျော် ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် ခဲ့သည် - Pandaily
US Troupe ၏ပထမ သုံးလပတ် ဝင်ငွေ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ၉၀ သန်းကျော် ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် ခဲ့သည်
Jun 02, 2022, 20:38ညနေ 2022/06/02 23:11:05 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း e-commerce ၀ န်ဆောင်မှု ပလက်ဖောင်း ဖြစ်သော Meitang က ကြာသပတေး နေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်မတ်လ ၃၁၊ ၂၀ ၂၂ ကုန်ဆုံး သည့် သုံးလ အတွက် ၎င်း၏ အတည်မပြု ရသေး သော ပြည့်စုံသော ရလဒ်များ. ဒီ လေး လ ပတ် မှာ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ဝင်ငွေ ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အလားတူကာလ နဲ့ ယှဉ် ရင် ယွမ် ၃၇ ဘီလျံ ကနေ ၄၆. ၃ ဘီလျံ (ဒေါ်လာ ၆. ၉၄ ဘီလျံ) အထိ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက် လာပါတယ်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ အစားအစာ ဖြန့်ဝေ ခြင်း၊ ဆိုင် တွင်း ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ဌာနခွဲ မှရရှိသော စုစုပေါင်း လည်ပတ်မှု အမြတ် သည် ယွမ် ၅. ၁ ဘီလီယံ နှင့် nbsp ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အလားတူကာလ ထက် & nbsp ပိုမိုမြင့်မား ခြင်း၊ ယွမ် ၃. ၉ ဘီလီယံ နှင့် nbsp ၊ . အခြားတစ်ဖက် တွင်, အသစ်သော အစီအမံ များနှင့်အခြား ဌာနခွဲ များ ၏လည်ပတ်မှု ဆုံးရှုံးမှု တစ်နှစ် ပြီး တစ်နှစ် တိုးချဲ့ ပေမယ့် သုံးလ တစ်ကြိမ် ကျဉ်းမြောင်း ။
ကုမ္ပဏီ၏ ချိန်ညှိ ထားသော EBITDA နှင့် ချိန်ညှိ ထားသော အသားတင် ဆုံးရှုံးမှု သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် တိုးတက် လာခဲ့ပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် အနှုတ်လက္ခဏာ နှင့် nbsp အသီးသီးရှိသည်။ ယွမ် ၁. ၈ ဘီလီယံ နှင့် nbsp ၊ ယွမ် ၃. ၆ ဘီလီယံ နှင့် nbsp ၊ . ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ၎င်းသည် ငွေသား နှင့် ညီမျှသော ယွမ် ၃၅. ၄ ဘီလီယံ နှင့် ရေတို ဘဏ္ ury ာရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၆၈ ဘီလီယံ နှင့် nbsp ရှိသည်။ ယွမ် ။
အထူးသဖြင့် ပြင်ပ စိန်ခေါ် မှုများ ရှိသော်လည်း အမေရိကန် အဖွဲ့သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် အစားအစာ ဖြန့်ဝ ေရေး ကဏ္ in တွင် ကောင်းမွန်သော တိုးတက်မှု ရရှိခဲ့သည်။ ဌာနခွဲ ၏ ၀ င်ငွေသည် ယခင်နှစ် ထက် ၁၇. ၄% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယွမ် ၂၄. ၂ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် အမှာစာ ပမာဏနှင့် ပျမ်းမျှ အမှာစာ တန်ဖိုး တိုးလာ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Meituan မှ ထောက်ပြ သည်မှာ စာပို့ သူသည် အစားအစာ ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း ၏အဓိက အချက်ဖြစ်သည်။ Courier များသည် လုံလောက်သော Courier စွမ်းရည်နှင့် လုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင် ပတ် ၀ န်းကျင် ကို သေချာစေရန် ကုမ္ပဏီသည် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရ များနှင့်အတူ Courier ၀ န်ထမ်းများအတွက် COVID-19 အခမဲ့ စမ်းသပ် မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့ ထားသည့် ရပ်ရွာ များ၌ နေထိုင် သူများအတွက် အခမဲ့ နေရာထိုင်ခင်း သို့မဟုတ် အနားယူ ရန် နေရာများ ပေးသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် မြို့ကြီး များစွာ ရှိ စာပို့ သူများအတွက် စမတ် လုံခြုံရေး ခမောက် များ ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ရှန်ဟိုင်း အား ပြန်လည် ရှင်သန် လာစေရန် မြှင့်တင် ပေးသည့် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ များမှ Meituan, Hello Company
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၁၅. ၈% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၇. ၆ ဘီလီယံ ယွမ် ၊ လည်ပတ်မှု အမြတ် မှာ ၂၆. ၄% မှ ၃. ၅ ဘီလီယံ ယွမ် သို့ တိုးလာပြီး လည်ပတ်မှု အမြတ် မှာ ၄၅. ၆% ရှိသည်။
Meituan Select နှင့် Meituan ကုန် စုံ ကဲ့သို့သော အစပျိုး မှု အသစ် များနှင့်အခြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သစ် များအတွက် ကုန်ပစ္စည်း လက်လီ လုပ်ငန်း သည် ကုမ္ပဏီ ၏အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု area ရိယာ အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေ ဦး မည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် ဌာနခွဲ ၏ ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ၄၇. ၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယွမ် ၁၄. ၅ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း လက်လီ လုပ်ငန်း တိုးချဲ့ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Meitang ကိုတည်ထောင် သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Wang Xing က “Omikron ဟာ မတ်လ ကတည်းက တရုတ် နိုင်ငံကို ပျံ့နှံ့ သွား ခဲ့ပေမယ့် ပထမ သုံးလပတ် မှာ စီးပွားရေး ကဏ္ all အား လုံးမှာ ကျန်းမာ တဲ့ တိုးတက်မှု ကိုရရှိ ခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ စွမ်းရည် များ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေရှည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုသည် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ On-demand လက်လီ ရောင်းချ မှုစနစ် နှင့်အတူ COVID ပြန်လည် ရှင်သန် မှု ကာလအတွင်း Mittle Troupe ကို ထူးခြားသော အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င် စေခဲ့သည်။ “
ဝမ် နိဂုံးချုပ်: “Meituan ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု မောင်း နှ င်ရန် နှင့် ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေးကို မြှင့်တင် ဖို့ ” လက်လီ + နည်းပညာ ” ကော်ပိုရိတ် မဟာဗျူဟာ မှ ကျူးလွန် နေသည်။ ဤသည် သစ်ကို စက်မှု လုပ်ငန်းများ, အသစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် တရုတ် လက်လီ လုပ်ငန်း အတွက် မော်ဒယ် သစ် များအတွက် ပို ကောင်းတဲ့ ဂေဟစနစ် ဖွံ့ဖြိုး ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင် ကျနော်တို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် စားသုံး သူများအတွက် သာ။ ကြီးမြတ် တန်ဖိုးကို ဆက်ကပ် ပါလိမ့်မယ်။”
JD.com သည် အစားအစာ ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း ကြိုးစား မည်
China E-commerce ကော်ပိုရေးရှင်းJingdongအစားအသောက် ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ဖို့ ကြိုးစား မယ်။ အဲသည် အစီအစဉ် အရ ကုန်သည် တွေအနေနဲ့ JD.com Home App ကနေ တစ်ဆင့် လုပ်ကိုင် မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမ်ားႀကီးသံုးစြဲသူ ၈၂၄ သန္းအတြက္ Telemetric ကို အသံုးျပဳမွာျဖစ္ၿပီး၊ တႏိုင္တပိုင္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္၊
တရုတ်ဟာ E-commerce နဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ပလက်ဖောင်းတွေထက်အများကြီးများပြားတဲ့ အစားအစာတွေကို ထုတ်လုပ်ပြီး မျှော်မှန်းထားတဲ့ ပထမသုံးလပတ်ရလဒ်ကို ကျော်လွန်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ဝယ်ယူသူ ၈၂၃၈ သန်းအထိ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်အဖွဲ့များ အသုံးမပြုသော ခရီးသွားအမိန့်ကြောင့် ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်ရေးအတွက် အဆင့်မြှင့်ဆောင်ရွက်မည်
အမေရိကန်သံရုံးက ကြာသပတေးနေ့က ကြေညာခဲ့တဲ့ သည်အမိန့်ဟာ ကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ခရီးသွားတွေကို အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ပြီး သည်ကုမ္မဏီဟာ သည်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဒဏ်တွေအတွက် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို အဆင့်မြှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။